Thwebula Evernote 6.22.3.8816 – Windows – Vessoft
WindowsIhhovisiIzinothi zokunamathisela kanye nabahleliEvernote
Isigaba: Izinothi zokunamathisela kanye nabahleli
Ikhasi elisemthethweni: Evernote
Amazwana ku Evernote
Evernote software ehlobene
Lena isofthiwe yokudala nokuphatha amanothi, asekela ukusebenzisana kwezinto zokwakha nokuvumelanisa kuzo zonke amadivayisi womsebenzisi.
I-Metapad – umhleli wombhalo osheshayo onesethi yezimpawu eziwusizo. Isoftware iqukethe uhlelo lokucinga oluhlakaniphile, ukufakwa kwamagama angukhiye futhi ikuvumela ukubala izinhlamvu.
I-Microsoft Office Excel Viewer – isoftware yokusebenzisa, ukubuka nokuphrinta amaspredishithi kagesi ngefomethi ye-Excel. Isoftware inika amandla okubuka amadokhumenti ngezindlela ezahlukahlukene futhi iguqule imininingwane ethile yekhasi.
Ukuphepha Kwe-Intanethi ye-G – i-antivirus evikela ubuchwepheshe besimanjemanje bobuchwepheshe, ubuchwepheshe bokutholwa kwe-malware etholakele kanye nesicishamlilo sokuphepha kwe-inthanethi.